Raw NSI-189 Phosphate powder (1270138-41-4) Tsanangudzo
Raw NSI-189 Phosphate powder ndeyeurogenic uye neotropic nyanzvi yekutsvakurudza yakagadzirwa kubva ku nicotinamide uye pyrazine. Rakagadzirirwa kutongerwa miedzo yakaratidza kuti inokurudzira neurogenesis kana neuronal sekugadzirwa kweiyo muuropi.
Muzvidzidzo zvezvipfuwo, yakaratidzawo kuwedzera huwandu hwechi hippocampus ne 20% nokudaro kuchinja maitiro ehutano hwekuora mwoyo. Dzidzo dzakadaro dzakaratidza kuti inogona kuva yakagadzirisa kurapa kuderedza.
Raw NSI-189 Phosphate powder inofungidzirwawo kuti inoratidzira kurapa kune imwe mamiriro ezvinhu kusanganisira post-traumatic stress disorder (PTSD), chirwere cheAlzheimer uye zvinetso zvine chokuita nemakore.
Product Name Raw NSI-189 Phosphate powder
Kemikari Name UNII-HX0VO60T62;HX0VO60T62;AKOS030632361;Methanone,(2-((3-methylbutyl)amino)-3-pyridinyl)(4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl)-, phosphate (1:1)
muchiso Name Raw NSI-189 Phosphate powder
Kirasi yeMishonga Nootropic
Molecular Wsere 464.503 g / mol
ruvara Yakachena kusvika kune chena
Fasoracetam APane Iyo inoshandiswa pakurapa imwe mamiriro ezvinhu kusanganisira shure-kunetseka mupfungwa kunetseka (PTSD), chirwere cheAlzheimer uye zvinetso zvine chokuita nemakore.
mbishi NSI-189 phosphate powder (1270138-41-4)
NSI-189 phosphate powder (1270138-41-4) Meitiro yezviito?
Iyo nzira yekuita kweNSI-189 phosphate inoramba iri chinhu chakavanzika. Izvo zvave zvichinyatsofungidzirwa kuti NSI-189 inosungira kugamuchira glucocorticoid muuropi. Glucocorticoid receptor binding ingangodaro iine mafungiro asina kunaka anoderedza kupararira kwecortisol. Cortisol inodzvinyirira hormone inobatanidzwa mukuora mwoyo uye zvimwe zvinokonzera kushungurudzika neuropsychiatric disorders.
Benefits of NSI-189 phosphate powder (1270138-41-4)
NSI-189 inhengo ye nootropic ikozvino iri kuongororwa neNeuralstem kuitira kuti iishandise kugadzirisa zvirwere zvakawanda zvepfungwa zvakadai sekuora mwoyo uye zvirwere zveeurodegenereative.
varumbidzwa NSI-189 phosphate powder (1270138-41-4) Dosage
Pamusana pekuti NSI-189 phosphate powder isati iri mishonga yekuedza, hapasati yave yakagadziriswa. Zvisinei, panguva yekuedzwa varwere vakapiwa doses zuva rimwe nerimwe re40mg, 80mg, uye 120mg pamusana wepamusoro pamusi wepamusoro kwemazuva e28. Munguva iyi, varwere havana kumbotaura chero zviitiko zvakakomba kana migumisiro, uye NSI-189 phosphate yakawanikwa ichiremerwa zvakanaka. Uyewo, pakanga paine kuderedza kuderedza kuora mwoyo uye zviratidzo zvekuziva nezvevarwere vanotora zviduku zve 40mg ne80mg, asi kwete kune avo vanotora 120mg pazuva. Izvozvo zvinotanga kuwanikwa zvemiedzo zvinotsigira pfungwa yokuti NSI-189 phosphate inogona kubata MDD. Kunyange zvakadaro, zvimwe zvidzidzo pamusoro pesero uye nzira yekuita kweNSI-189 phosphate inobatsira kubatsira kusimbisa kutarisa kwekutanga uye kubatsira kubatsira.
Zvikanganiso of NSI-189 phosphate powder (1270138-41-4)
Zvimwe zviitiko zvinoshuva zvakave zvave zvakaoma muromo, kupera, kuora musoro, mutsiva, kurara, kuneta, kusagadzikana, kutadza kunaka kwehope, kurota / kurota zvakajeka, parathesia, kusuruvara, hyperthermia, nausea, kurwadziwa kweganda, uye kuputika.